श्रीमानलाइ सँगै सु’त्न र खाना प’काएर नखु’वाउने श्रीमतीलाई ६ वर्ष जे’ल” – Life Nepali
श्रीमानलाइ सँगै सु’त्न र खाना प’काएर नखु’वाउने श्रीमतीलाई ६ वर्ष जे’ल”
एजेन्सी – युरोपेली मुलुक इटलीमा एउटा अनैठो घटना भएको छ । आफूलाई खाना पकाएर नखुवाएको र घरधन्दा पनि राम्रोसँग नगरेको भन्दै एक जना पुरुषले आफ्नी श्रीमती विरुद्ध अदालतमा मुद्दा हालेका छन् । यदि उनको अभियोग प्रमाणित भयो भने विचरी ती श्रीमतीलाई ६ वर्षसम्मको जेल सजाय हुने भएको छ । मध्य दक्षिण इटालीको लाजियोमा बस्ने एक महिलामाथि आफ्नै लोग्नेले घरपरिवारलाई बेवास्ता गरेको आरोपमा मुद्दा हालेका हुन् । ”***थप समाचारको लागी यो भिडियो” हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस’,
उनले आफ्नी श्रीमती विरुद्ध दिएको उजुरीमा श्रीमतीले घर सफा नगरेर परिवारलाई अपहेलना गरेको तथा परिवारप्रति श्रीमतीको दुव्र्यवहार पछिल्लो दुई वर्षसम्म जारी रहेको उल्लेख छ । साथै ती ४७ वर्षका पुरुषले आफ्नी श्रीमतीकै त्यस्तो व्यवहारका कारण आफू निकै फोहोर अवस्थामा बस्न बाध्य भएको गुनासो गरेका छन् ।
आफूले पकाउनका लागि विभिन्न खानेकुरा किनेर ल्याउने गरे पनि श्रीमतीले नपकाउने र कुहाएर टोकरीमा फ्याँक्ने गरेको उनको आरोप छ । उनको अर्को आरोप झनै गम्भीर छ । आफू श्रीमतीसँग एउटै ओछ्यानमा सुत्न नपाएको र सँगै सुत्न खोज्दा लात्ताले हिर्काएर घचेटेको उनको गुनासो छ । यदि वादीको दाबी पुगेमा ती महिलालाई ६ वर्षसम्मको जेल सजायँ हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
Previous तिर्सना बुढाथोकीको अ’हिलेसम्मै अ’श्लील भिडियो लि’क भयो ! ( भिडियो )
Next यी हुन् प्रेममा कहिल्यै धो’का नदिने ५ राशिका युवती ! ( एकपटक हेर्नुहोस )